DHAGEYSO Taliyeyaasha saldhigyada magaalada Muqdisho oo lala xisaabtamayo.
Xeer ilaaliyaha qaranka Soomaaliya DR Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in waaxyaha garsoorka Soomaalia ay guda galayaan la xisaabtanka saraakiisha amaanka gaar ahaan taliyeyaasha maamula saldhigyada ku yaala magaalada Muqdisho maadaama sida uu xeer ilaaliyuhu sheegay ay ku kacaan qaladaad waa weyn oo ka hor imaanayada sharuucda u degsan dalka Soomaalia.
Xeer ilaaliyuhu wuxuu xusay in qaar ka mid ah saldhigyada ciidamda Booliska ee gobolka Banaadir si sharci daro ah loogu xiro dad shacab ah oo aan wax danbi ah galin, in mararka qaar warbixino khaldan ay la wadaagaan waaxda garsoorka taasoo qasab ka dhigaysa in la xoojiyo isla xisaabtanka taliyeyaasha ciidamada Booliska ee gobolka banaadir.
Xeer ilaaliyaha qaranku wuxuu dhanka kale sheegay in cidii howl wanaagsan qabata oo si haboon uga soo baxda waajibkeeda ay mutaysan doonta abaal marin ay waaxda garsooorku ugu tala gashay.
Xeer ilaaliyaha qaranka Soomaaliya dr Axmed Cali daahir wuxuu intaasi raaciyay inay ka go’an tahay sidii gormeero loogu samayn lahaa maxkamadaha iyo saldhigyada si loo hubiyo hawalaha ka socda inay yihiin kuwo hufan iyo inkale.
← DHAGEYSO Madaxweynaha galmudu oo sheegay inay u diyaar garoobeen dagaalka Al-Shabab
Madaxweynaha xaaf oo ugu baaqay shacabka inay Canshuurta bixiyaan. →
Google introduces Motorbike Mode navigation in Kenya October 15, 2018
Boqorka Sacuudiga iyo Erdogan oo ka wada hadlay wariyaha la waayay Jamal Khashoggi October 15, 2018
Suuriya iyo Jordan oo dib u furay xuduuda ay wadagaan October 15, 2018
DHAGEYSO Ra’isulwasaaraha Soomaaliya oo maanta gaaray magaalada Jowhar. October 15, 2018
DHAGEYSO Farmaajo oo dib ugu laabanaayo magaalada Muqdisho October 15, 2018
DHAGEYSO Gabdho Soomaali ah oo maydadkooda laga helay dalka Maraykanka. October 15, 2018
DHAGEYSO Gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo sheegay in la toogto askarigii isbaaro dhigta gobolkaasi. October 15, 2018
Jacque Maribe iyo Joseph Irungu oo iska fogeeyay eedeymihii loo soo jeediyay October 15, 2018
Wasiirkii hore ee cayaaraha oo loo qabtay ilaa iyo khamiista inuu booliska isku soo dhiibo October 15, 2018
Ururka macalimiinta KNUT oo mar kale shaqa joojin ku hanjabay October 15, 2018
Google introduces Motorbike Mode navigation in Kenya
Boqorka Sacuudiga iyo Erdogan oo ka wada hadlay wariyaha la waayay Jamal Khashoggi
Suuriya iyo Jordan oo dib u furay xuduuda ay wadagaan
DHAGEYSO Ra’isulwasaaraha Soomaaliya oo maanta gaaray magaalada Jowhar.
DHAGEYSO Farmaajo oo dib ugu laabanaayo magaalada Muqdisho
DHAGEYSO Gabdho Soomaali ah oo maydadkooda laga helay dalka Maraykanka.
DHAGEYSO Gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo sheegay in la toogto askarigii isbaaro dhigta gobolkaasi.
Jacque Maribe iyo Joseph Irungu oo iska fogeeyay eedeymihii loo soo jeediyay
Wasiirkii hore ee cayaaraha oo loo qabtay ilaa iyo khamiista inuu booliska isku soo dhiibo
Ururka macalimiinta KNUT oo mar kale shaqa joojin ku hanjabay